सरस्वती प्रधानले दिइन् फेरी रूपा सुनारविरुद्ध उजुरी, के छ उनको आरोप ? – Classic Khabar
June 30, 2021 266
दलित युवतीलाई घरमा कोठा नदिएको आरोपमा ३ दिन परेको भन्दै प्रहरी हिरासतमा बसेर वाहिर आएकी सरस्वती प्रधानले रुपा सुनार विरुद्ध उजुरी दिएकी छन् । उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा आफ्नो ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै रुपा विरुद्ध उजुरी दिएकी हुन् । सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले आफ्नो मञ्जुरी बिना फोन रेकर्ड गरी व्यक्तिगत जीवनको स्वतन्त्रता हनन गरेको उनको आरोप छ ।
Prevएमाले बैठकमै कसले माग्यो शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको राजिनामा ?
Nextदुखी गरीबले सित्तैमा खाना खाने ठाउ भात्का,उनुको ड,रलाग्दो रहस्य खुल्यो (भिडियो)